फेसबुकमा लिक्ड भयो प्रदीपको ‘रोजी’ टिजर ! « Ramailo छ
फेसबुकमा लिक्ड भयो प्रदीपको ‘रोजी’ टिजर !
प्रदीप खड्का स्टारर ‘रोजी’को टिजर फेसबुक सार्वजनिक भएको छ । युट्युबमा सार्वजनिक नभएको टिजरलाई नेपालगन्ज निवासी श्रीधर भारद्वाजले आफ्नो अकाउन्टबाट अपलोड गरेका हुन् । उनले उक्त टिजर १६ जनालाई ट्याग पनि गरेका छन् ।
टिजर अहिलेसम्म २० जनाले शेयर गरिसकेका छन् भने ६ सय बढीले हेरेका छन् । के ‘रोजी’को टिजर लिक्ड भएकै हो त ? यदि होइन भने किन युट्युबमा सार्वजनिक भएन त ? यस विषयमा प्रदीपसँग बुझ्न खोज्दा उनले टिजर लिक्डनै भएको बताए । ‘हामीले आगामी शुक्रबारदेखि ‘सन्जु’सँगै हलमा रिलिज गर्ने योजना बनाएका थियौँ । र हाम्रो एउटा ग्रुप च्याटमा टिजर शेयर गरेका थियौँ । टिमसँग प्रतिक्रिया बुझ्नलाई, तर एकजना सदस्यले लिक्ड गरिदिनु भएछ ।’ प्रदीपले भने ‘यसमा आपत्तिको विषय छैन । जुन तरिकाबाट रिलिज गर्ने सोच राखेका थियौँ त्यो मात्र असफल भएको हो । प्रदीपले उक्त टिजरलाई परिमार्जित गरेर हलमा यसैसाता देखि रिलिज गरिने पनि बताए ।
५९ सेकेन्ड लामो टिजरमा अभिनेता प्रदीपले प्रेमिका ‘रोजी’ उर्फ परमिता राज्यलक्ष्मी राणालाई गोलि चलाएर मारेका छन् । अनि उनि भन्छन ‘मैले उसलाई मारेको होइन, मुक्ति दिएको हुँ । मलाई ऊबाट र उसलाई यो संसारबाट ।’ यो डाइलग र पहिलो झलकका दृश्यले ‘रोजी’ले थप कौतुहलता सृजना गरेको छ । फिल्ममा प्रदीप नयाँ अवतारमा प्रस्तुत भएका छन् ।
निरक पौडेलले निर्देशन गरिरहेको फिल्मलाई केदार भुसालले लेखेका हुन् | फिल्ममा प्रदीप र परमितासँगै मिरुना मगर, कर्मा शाक्य, बरुण आरएल राणा, रविन्द्र खड्का, प्रकाश श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
गोपीकृष्ण मुभिज र आरोही इन्टरटेनमेन्टको व्यानरमा निर्माण फिल्मका प्रस्तुतकर्ता उद्दव पौडेल हुन् । ‘रोजी’मा आयरा पौडेल र आरोही केसी लगानी छ ।